चितवन – विश्व बैङ्कको ३ अरब ऋण सहयोगबाट प्राप्त रकमबाट थालिएको ३३ किलोमिटर मुग्लिन–नारायणघाट सडक विस्तार आयोजनाको काम धिमा गतिमा अघि बढिरहेको छ । मुग्लिन–नारायणघाट सडकको कुल लम्बाइ ३६ किलोमिटरमध्ये ३३ किलोमिटरको काम थालिए पनि कामले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन । २०७१ चैतबाट सुरु भएको यो आयोजनाको काम सकिनुपर्ने मिति २०७४..
इटालियन डायरेक्टर बर्नार्डो बर्टुलुसीसँग फिल्ममा डेब्यु गरे तर त्यो सिन काटिएर फिल्म रिलिज..
मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड कति धेरै कठिनपूर्ण यात्रा हो, त्यो बाटो भएर हिँड्ने सबै परिचित ..
उर्वर समय विद्यार्थी राजनीतिमा बिताएका यज्ञराज सुनुवार ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद ह..
मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रा गर्नु सजिलो छैन्, ड्राईभर र यात्रु दुवैका लागि । एकातिर..
सांसद विशाल भट्टराईका दुःख : चुनावमा लागेको ऋण तिरिसकेको छैन
सांसदका दुःख भनिसाध्य छैन । देख्नेले सुविधासम्पन्न तरिकाले बसेका देख्छन् । तर, उनीहरुका पनि दुःख हुन्छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटिएका खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विशाल भट्टराईले रातोपाटीका दीपेन्द्र राईलाई आफ्ना दुःख यसरी सुनाए : दुःख नम्बर १ मतदाताका असीमित आकांक्षा र सभासद्बीच अन्तरविरोध नै सबैभन्दा ठूलो..
मेरी आमा : फोटोमा मधुवालाझैँ सुन्दर लाग्नु हुन्थ्यो
स्कुल जान झोला बोकेर सबेरै निस्केको बच्चा त्यो साँझ घरै फर्किएन र त्यो राति पनि आएन । भोलिपल्ट बिहान ममी खोज्न निस्किनु भयो । सीधै फिल्महलको पालेसँग गएर सोध्नुभयो– “खोइ मेरो साहु ?” साहु हलमै थियो । पालेले साहुलाई देखाइ दिए । ममीलाई थाहा थियो “हराइ रहने साहु कहिले जात्रा हेर्न गएको हुन्छ नत्र भने […]
राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलबाट थालेको राजनीतिलाई आधार मान्ने हो भने राप्रपा नेपाल प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी पार्टी अध्यक्ष कमल थापाभन्दा ‘सिनियर’ मानिन्छन् । गिरीले २०२५ बाट विद्यार्थी राजनीति थाले पनि थापा २०२७ मा जोडिएका थिए । राजनीतिमा लागेपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने सपना जोकोहीले देखेका हुन्छन् । अ..
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी गत कात्तिक १७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लन लागेकै बेला चिलले चल्ला टिपेझैं सुरक्षाकर्मीले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाललाई समाते । भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कालोझन्डा देखाउन विमानस्थल प्रवेशद्वार बाहिर पुगेका उनी ११ः५५ बजे समातिए । टिकट काट्ने बहानामा एक..
आमाप्रति सबैको सम्मान हुन्छ नै । आमाले नै छोराछोरीको भविष्यको बाटो कोर्छन् । तिनै आमाहरुको सङ्घर्ष र आफ्ना सन्तानप्रतिको मायाममतालाई पस्कन रातोपाटीले ‘मेरी आमा’ शीर्षकको स्तम्भ सुरु गरेको थियो । यसपालिको ‘मेरी आमा’ स्तम्भमा छिन्, स्वास्थ मन्त्री एवं काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाकी आमा रामेश्वरी थापा । रातोपाटीकर्मी दीपेश शा..
एमालेसम्बद्ध नेता २०४७ सालको संविधानमै रमाइरहेका थिए । पहिचान र संघीयताको मुद्दामा एमाले प्रस्ट थिएन । पहिलो संविधानसभाबाट संघीयता र पहिचानलाई मिल्न नदिने र असफल बनाउन एमाले लागिपरेकै हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वरिष्ठ नेता अशोक राई भन्छन्, ‘त्यसो भएपछि पार्टीमा रहनुको अर्थ देखिनँ । एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएँ ।’ मनमोहन ..
दिदीबहिनी छैनन्, भाइटीकामा निधार खाली हुने भयो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने चिन्ता नगर्नुस् । भाइटीकामा टीका लगाउन चाहनेले काठमाडौंको वसन्तपुरमा रहेको काष्ठमन्डप जानुहोला । त्यहाँ अञ्जली मास्केले सामूहिक भाइटीका लगाइदिनेछिन् । मास्केले संवत् २०५५ बाट सामूहिक भाइटीका लगाइदिने गरेकी हुन् । भाइटीका लगाइदिएबापत दक्षिणा वा उ..
मोफसलमा बसेर पनि लेखेरै बाँच्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा पत्रकार चन्द्रकिशोरलाई लिन सकिन्छ । सर्लाहीका स्थायी बासिन्दा उनी वीरगन्जलाई कर्मथलो बनाएर ‘तराई चिनौँ’, ‘डेटलाइन तराई’ मार्फत पहाड र तराई–मधेसको हितका कुरा गर्दै आएका छन् । भन्छन्, ‘तराई–मधेस बुझ्न पहाड घुम्नैपर्छ ।’ पहाडेविना तराईवासीको हित हुनै सक्दैन भन्ने उनको मान्य..
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि उनलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको हाम्रो वर्तमान समाजको चरित्रलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो समाजले नायकको खोजी गरिरहेको झल्को पाइन्छ । स्वभाविक हो, नायकको खोजी गर्ने समाजले खलनायकको पनि खोजी गर्छ । अथवा भनौँ कसैमा राम र कसैमा रावणको रुप खोजी हिँड्छ । जसलाई सार्थक तुल्याउन समाजका टाठाबाठा कहलिएक..
‘सम्बन्धविच्छेद महिला सशक्तीकरणको सूचक होइन’
लामो समयदेखि ‘मिडिया’ र महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत बबिता बस्नेत मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) की अध्यक्ष र घटना र विचार साप्ताहिककी सम्पादक हुनुहुन्छ । सूचनामा महिलाको पहुँच बढाउने काममा सक्रिय उहाँसँग ग्रामीणदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मका महिलासँग काम गरेको अनुभव छ । बस्नेतसँग महिला केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि दीपेन्द्र राईल..
महिलाले हलो जोत्न, घर छाउन, मलामी जान र मार हान्न हुँदैन भन्ने पुरातन मान्यता छ । उल्लिखित चार काम गर्न महिलाले किन हुँदैन भनेर स्थानीय विद्वान् तथा पण्डितसँग जिज्ञासा राख्दा अर्घाखाँचीकी कविता पौडेलले चित्तबुझ्दो जवाफ पाइनन् । गर्न हुँदैन भनिएको चार काम गरेर पौडेलले चुनौती दिइन् । ‘महाभारत, देवीभागवतलगायत थुप्रै किताब पढें,’ था..
२०२९ सालमा राप्ती पारिको जिल्ला जाजरकोटको खलङ्गा–९ कालेगाउँमा जन्मेका हुन् पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत । २०५२ देखि सुरु भएको जनयुद्धमा लागेर राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्दै आएका बस्नेत पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रमुख स्वकीय सचिव थिए । उनी पहिलो र दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जाजरकोटबाट विजय भएका थिए । रातोपाटीका निय..
कुनै समय भारतको महाराष्ट्र र मुम्बईमा शिवसेना दलको एकछत्र दबदबा थियो । हिन्दुवादी राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहेको शिवसेना दलको प्रमुख थिए बालासाहेव ठाकरे । झन्डै २० वर्षअघि भारतको महाराष्ट्र प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीसँगको गठबन्धनमा शिवसेना दल सत्तामा पुगेको थियो । नौ वर्षको उमेरदेखि दिल्ली र मुम्बईमा होटल तथा सेठहरूका बङ्गलामा घ..
राजनीति उद्योगका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । राजनीति उद्योगका रूपमा परिणत हुँदै गए पनि सांसद रामहरि खतिवडा सचेत छन् । सांसद खतिवडाले गत साउनमा २६ महिनाको तलब ओखलढुंगाका विकास निर्माणमा खर्चेका थिए । उनले आफूले खर्चेको विकास निर्माणको शीर्षक र रुपैयाँसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । संसद्मा शून्य र विशेष समय व्यवस्था गरिएको हुन्छ । [&he..
मानिसपिच्छे चाहना फरक–फरक हुन्छ । कसैको चाहना ‘कलरफुल’ हुन्छ भने कतिपयको ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ नै भए पनि राष्ट्रहितसँग जोडिएको हुन्छ । ‘नेपाल आफ्ना नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क दिन सक्ने देश बनोस्’ भन्ने चाहना राख्ने पत्रकार मोहन मैनाली कति राष्ट्रवादी हुन् ? तपाईंले नै खुट्याउनुहोला । ‘तर, नेपाललाई यस्तो बनाउ..
‘सामाजिक कार्यकर्ताको सपना भनेको समाज रुपान्तरण नै हो,’ सक्रिय राजनीतिबाट टाढिएर सामाजिक कार्यकर्ताको परिचय बनाएका किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समिति कार्यवहाक अध्यक्ष दिवस राई भन्छन्, ‘सामाजिक कार्यकर्ता सधैं सामाजिक कार्यकर्तामै सीमित रहँदैन । समयक्रममा ऊ सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पनि सक्छ ।’ किरात राई यायोक्खाका कार्यवहाक अध्यक्..
२०७० मा सविधानसभामा आफ्ना श्रीमतीलाई समानुपातिक सभासद् बनाएपछि अनिलकुमार झा त्यसबेला निकै आलोचित भएका थिए । आलोचना भएपछि उनलाई लाग्दो हो मैले गल्ती गरेको छु कि क्या हो ! तर त्यसको आलोचना गर्नेहरु अहिले भन्छन्, ‘जोडी होस् त डिम्पल र अनिल जस्तो ।’ डा. डिम्पल झा नरदेवी आयुर्वेदमा डाक्टर थिइन् । सविधानसभामा तत्कालीन सङ्घीय सद्भावना ..
सीपी गजुरेल नेपाली माओवादी आन्दोलनका एक हस्ती । पार्टीभित्र सधैँ विद्रोही खेमातिर लाग्ने उनको विगत छ । बेला–बेला चर्को अभिव्यक्ति दिएर विवादमा पनि तानिन्छन् उनी । पहिलो संविधानसभामा उनी सिन्धुलीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् थिए । साधारण जीवन बाँच्न मन पराउने यी नेता अहिले मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा क्रान्तिकार..
कान्तिपुरको पाठकपत्र, पत्रिकाको सम्पादक हुँदै युग पाठक अहिले हस्तक्षेपकारी अध्येता बन्ने सकसपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् । पाठकले इतिहास खोस्रेर केही नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्, जसले तीव्र बहस निम्त्याउने पक्का थियो । इतिहास निर्माण जटिल र सकसपूर्ण हुने गर्छ । तर, हामी भने इतिहासको त्यस्तो स्वप्निल कल्पना गर्छौं, जहा..
रातो टिसर्ट, हाफ प्यान्ट, काँधमा झोला र घाँटीमा मालाझैँ हरदम चस्मा झुन्ड्याएर सडकछेउ पैदल हिँड्ने महावीर पुनको जीवनशैली प्रेरणादायी र रोचक छ । म्यागासेसे पुरस्कार थाप्न जाँदा उनले लगाएको कालो कोट–प्यान्ट साथीको थियो । ‘बौद्धिक फकिर’ हुन् महावीर पुन । म्याग्दीको नागीमा २०११ मा जन्मिएका उनी पढाइमा सानैदेखि अब्बल भए पनि नेपाल बसुन्..